Indlela yokuphuma kwi-Rut kwaye uzive kungekhona ngoko Blah
by UJaelin K. Reece, Coach Life Coach
Umbuzo womfundi: Kwiinyanga ezimbalwa ezedlule ndiziva ngathi 'blah.' Andiqhelekanga ukuya kwindawo yokuzivocavoca, ngoko ke ndiyancipha. Andiyi kubonakala ngathi ndikhuthazwe kwaye ndivakalelwa ukuba ndihlala ndikhangele into ethi 'iya kusebenza' nokuba isondlo esitsha, ividiyo entsha yokuphucula, unyango olutsha olutsha ... nam udidi. Naluphi na ukuqonda kuya kuxabiswa kakhulu. ~ Robin
Impendulo kaJaelin: Dear Robin, ngelixa abaninzi bethu bangena kwixesha lokuziva 'blah', amava ahlala ixesha elide angabonisa ezinye izinto ezenzeka emzimbeni wakho, insima yakho yamandla kunye nengqondo.
Ukhangele 'impendulo' kodwa uya kuza engenanto.
Ndiyayiqonda ngaphakathi kwamandla akho ukuba ufuna uphando kunye nenjabulo, into enokukwenza uzive uphila. Kukho amanyathelo amaninzi endingawacebisa, nangona kunjalo ngaphakathi kwesi simo ndiza kunika ezimbini.
Ukulinganisela Ngokwenyama nangokwemvelo - Okokuqala, tyelela ugqirha wakho ngokwenyama kunye novavanyo lwamahomoni. Ukulinganisela ngaphakathi komzimba kuyona nto ibalulekileyo kwindlela esiva ngayo amandla ethu emzimbeni nangokomzwelo. Xa kwenzeka ukungalingani, iimpendulo zethu nazo ziba lingalingani kwaye ziphuma ngaphandle. Akukho nentshiseko okanye inzala ekuthatheni inxaxheba kwimisebenzi yobomi ngendlela efanayo nangaphambili. Ukungalingani nako kunokuba ngumqondiso wokudakumba. Ukuthetha nogqirha wakho malunga noko uhlangabezana nalo ekuqaleni.
Inhliziyo Chakra - Okwesibini, ndiyazi ukuba ngoxa unokuba ufuna ukunyamekela, uhamba nengqondo ejulileyo yentliziyo yakho chakra .
Ngenxa yokuba olu lusizi luyinto ongeyonto kwaye ungayazi ukuba ungayiphatha njani, awuzange uyibambe ngokungazi. Esi senzo 'sokunciphisa' okanye 'ukucindezeleka' sinokubangela ukuziva uxinezelekile. Ukujamelana nokudabuka, nangona unzima kwaye ungakhululekile, kunokukunceda ukuba uphume phambili.
Kukho ibali elimnandi elibizwa ngokuthi, "KUNYE I-HOLE KWI-SIDEWALK YAM", i-Autobiography kwiSahluko ezintlanu ezimfutshane nguPortia Nelson. Isiseko sebali kukuba siya kuqhubeka siphila kwi-rut, okanye siwa phantsi kwindawo efanayo kuze kube yilapho sikhetha ixesha elithile ukuba sithathe isenzo esahlukileyo, okanye sihambe ngaphantsi kwesitalato esahlukileyo. Cinga ngendlela ukuzivumela ukuba uzive ubuhlungu buya kuba yinto eyahlukileyo. Ndikunqwenela konke okusemandleni onke uRobin. Ungayenza!
Ukuziphendulela: UJaelin K. Reece uhlala ekwabelana ngemibono evela kumnxibelelwano onembile. Naliphi na icebiso alinikezayo alinakutsholwa ukunyusa iingcebiso zakho / iinkcukacha zomboneleli wakho wezempilo, kodwa kuhloswe ukuba unikele ngombono ophezulu egameni lakho ngokusekelwe kumbuzo owamcelayo kuye.
IYunivesithi yase-Illinois Urbana-Champaign Admissions
Izinto kunye nezinto eziphathekayo